Q वृद्ध मानिसहरुले किशोर किशोरीले भन्दा बढी खाना खानुपर्छ ?
एउटा व्यक्तिले उपभोग गर्नुपर्ने क्यालोरीको मात्रा निजको शारीरिक गतिविधिको स्तरमा निर्भर हुन्छ । त्यसैले, यदि वृद्ध व्यक्तिको केही काम पनि नगर्ने किशोरावस्थाको व्यक्तिको तुलनामा बढी सक्रिय जीवनशैली बिताउनु छ भने हरेक दिन धेरै क्यालोरी वा त्यस्तै अरु कुराको पनि आवश्यकता हुन सक्छ ।
Q छाला रोग विशेषज्ञ वा डर्माटोलोजिष्ट ?? मलाई लाग्छ म गर्भवती महिलाको अनुहारको छालामा आउने समस्या पुतली मेलास्माबाट पीडित छु
मेलास्मा भनेको प्राकजसो: धेरै गालाहरू र नाकको पुलमा देखिने उच्च गाडापना हो । यस्तो उच्च गाडापना चाया पोतो जस्तो खैरोदेखि कैलो रङको हुन्छ । अन्य सामान्य भागहरु भनेको निधार, चिउडो, ढाँड आदि हुन् । परीक्षण बिना तपाईंलाई के को समस्या भइरहेको छ भनेर भन्न सम्भव छैन । त्यसैले, तपाईं आफैंले डर्माटोलोजिष्टद्वारा जाँच गर्नु पर्छ भन्न आवश्यक छ ।